Qaababka Isticmaalka Tareenada T-25, sifooyinka farsamada
Ugu Weyn Ee Mandarin
Sida loo koro tufaaxa guriga
Mandarin wuxuu u yimid Yurub kaliya 170 sano ka hor thanks Michel Tecor. Miro ayaa lagu leeyahay magaca Shiinaha. Waxay cuni karaan kali taliyeyaasha hodanka ah ee Shiinaha - tangerines. Mandarins ee noocyada cirifka iyo noocyo yar-koraya ayaa ku habboon dhirta gudaha. Tixgeli noocyada, noocyada malaayiin, noocyo kala duwan oo lagu ogaado astaamaha iyo sifooyinka ugu muhiimsan.
Tangerines ee dhulka u furan yihiin miraha citrus, taas oo la barbardhigay liinta, waxay leeyihiin kala duwanaansho badan oo kala duwan sida qaybta iyo midabka miro, dhibaatada kala soocidda diirka, dhadhan iyo ari, xilliga Bisaylkiisa. Kalluumeysatadu waa inay fuliyaan shuruud kasta oo ah macaamiisha dooranaya ee miro badan.
Ubaxyada ugu wanaagsan ee buuraha alpine
Xasaasiyadaha ku saabsan sida loo kariyo salad leh hadhuudh iyo ulaha cusub - cuntooyinka xiisaha leh
Miyuu suurtogal ah in caan lagu beero guriga iyo sida loo sameeyo?
Waxay soo baxday in sunta jilicsan ee subaxda ay keeni karto faa'iidooyin caafimaad oo bini'aadam ah. Guryaha bogsashada ee khudraddan waxay saameyn togan ku yeelan karaan shaqada qalabka wadnaha iyo nacaybka. Waxaa muhiim ah in la ogaado sida loo isticmaalo si haboon u isticmaalka warshadan si aaney waxyeello u geysan oo aad uga qaadatid oo kaliya. Read More
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Mandarin 2019